Eyequant: Ubume bemephu ngobushushu kubhabho | Martech Zone
Eyequant: Imephu eshushu kwiFly
NgoLwesibini, Meyi 15, 2012 NgoMgqibelo, Julayi 8, 2017 Douglas Karr
Iliso yimodeli yokulandela umkhondo yamehlo ejonga ngokukodwa oko kubonwa ngabasebenzisi kwiphepha ngaphakathi kwemizuzwana yokuqala emi-3-5. Umbono ulula: ngaphakathi kwemizuzwana emi-5 umsebenzisi uya kuba nakho ukubona ukuba ungubani, lithini ixabiso lesindululo sakho, kunye nokuba wenze ntoni ngokulandelayo. I-EyeQuant ivumela ukwenziwa koyilo lwephepha ukuqinisekisa ukuba kunjalo.
Nazi iziphumo zasimahla zedemo yethu ye-EyeQuant… Ndonwabe kakhulu apho kunikwa ingqalelo kwiphepha lethu lasekhaya!
Yintoni eyahlula i-EyeQuant kwezinye iinkonzo kukuba kuthatha nje imizuzu embalwa ukufumana iziphumo. Iziphumo zikwafika kwiimephu ezi-3 ezahlukeneyo:
The imephu yoqwalaselo ibonisa ukuba zeziphi iindawo ekugcinwe kuzo umfanekiso weyona skrini iphambili, iphakathi okanye incinci, ngokulandelelana. Ingakumbi indawo ezinomtsalane wamehlo zinombala obomvu ocacileyo, iindawo eziphakathi ziphawulwe zimthubi, ezona ndawo zibuthathaka kumfanekiso-skrini wakho ziya kubonakala ziluhlaza okwesibhakabhaka. Iindawo ezingafihliyo azivelisi ngqwalaselo kwaphela.
The Imephu yokujonga ibonelela ngesishwankathelo esikhawulezayo sephepha lakho lewebhu elinomdla: libonisa ngokujonga nje into abasebenzisi abazakuyibona kwimizuzwana emithathu yokuqala yotyelelo lwabo. Ngokusekwe kubalo lobungakanani bobuchwephesha obubonakalayo kunye nomgama ophakathi kwescreen, iindawo ezifihlakeleyo zemephu yokuqonda ngabo abasebenzisi bakho baya kuyibona kweli nqanaba libalulekileyo lokuziqhelanisa.
The Imimandla enomdla inqaku libonelela ngeziphumo ze-EyeQuant ezineenkcukacha. Iyakwenza ukuba uchaze imimandla eli-10 kwiscreen sakho, apho i-EyeQuant iyakubala ixabiso lepesenti, umz. + 45% okanye -23%. Ixabiso libonisa ukuba ngaphezulu kangakanani (okanye ngaphantsi) indawo ebonakalayo xa kuthelekiswa nomndilili we skrini.
Iindleko zenkonzo zilungile, kunye noHlolo olu-5 lwe- $ 199 / mo yase-US okanye i-50 yeedola ezingama-449. Kukho amaxabiso eshishini akhoyo kwaye ujongano luyafumaneka kuzo zombini isiJamani nesiNgesi. I-EyeQuant nayo ine API kunye nephakheji yomthengisi ekhoyo!
tags: Ukuqwalaselwa kwemephuimephu yobushushuubushushuimephu yokuqonda
Iingcali zeNtengiso eziPhakathi Uya kufunda kwi-Intanethi
Indaleko yokuThengisa ngokuZenzekelayo
Meyi 15, 2012 kwi-6: 30 PM
Umsunguli we-EyeQuant apha. Enkosi ngokukhwaza uDouglas! Esi sisiqalo nje kwaye i-EyeQuant inezinto ezininzi * ezipholileyo kumbhobho wowama-2012.